‘थर्ड ह्वील’- हेलो शुक्रबार - कान्तिपुर समाचार
‘घर नजिकै सर्भिसिङ सेन्टर नहुँदा, सर्भिसिङ गराउन जाँदा पालो कुर्नुपर्दा र जहाँ पायो त्यहीँ सर्भिसिङ गराउँदा धेरैले दु:ख पाएको अनुभव गर्‍यौं र यो समस्या समाधान गर्ने प्रडक्ट बनाउँदा चल्छ भनेर सुरू गरेका हौं ।’
असार २९, २०७५ विमल खतिवडा
काठमाडौँ — बाटोमा बिग्रिएको मोटरसाइकल जहाँको तहीँ बनाउन आउने, आफ्नो घर वा कार्यालयमै मोटरसाइकल सर्भिसिङका लागि लिन आउने भए कति जाती हुन्थ्यो ? उपत्यकामा मोटरसाइकल धनीको यो साझा इच्छा पूरा गर्ने उद्देश्य राख्छ– थर्ड ह्वील ।
काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक करिब १० लाख मोटरसाइकल गुड्छन्, हरेक दिन तीमध्ये केही गन्तव्य नपुगी बिग्रिन्छन् । मोटरसाइकल चलाउनेले हरेकले कुनै न कुनै दिन यस्तो समस्या भोगेकै हुन्छन् । मोटरसाइकल सर्भिसिङमा दिनु अर्को झन्झटिलो काम हो । त्यसैले अत्यावश्यक नभई कमै मात्र मोटरसाइकल धनीले सर्भिसिङमा लैजान्छन् । बाटोमा बिग्रिँदा डोर्‍याउनु, सर्भिसिङमा घण्टौं पालो पर्खनु मोटरसाइकल धनीका साझा समस्या हुन् ।
बाटोमा बिग्रिएको मोटरसाइकल जहाँको तहीँ बनाउन आउने ? आफ्नो घर वा कार्यालयमै मोटरसाइकल सर्भिसिङका लागि लिन आउने भए कति जाती हुन्थ्यो ? उपत्यकामा मोटरसाइकल धनीको यो साझा इच्छा पूरा गर्ने उद्देश्य राख्छ– थर्ड ह्वील ।
सर्लाहीका ३५ वर्षीय अरुणकुमार राउत पढाइले इन्जिनियर हुन् । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजबाट बीई गरेका उनले भारतको चेन्नईस्थित भीईएलएस कलेजबाट एमटेक गरेका छन् । केही अघिसम्म सफ्टवेयर बनाउन किबोर्ड चलाउने उनका औंलाहरू अहिले मोटरसाइकल बिग्रिएको र सर्भिसिङ सेवा माग्ने ग्राहकको सेवामा तल्लीन छ ।
महिनौंको अनुसन्धानपछि उनले सुरु गरेको कम्पनी थर्ड ह्वीलले अहिले एप, वेबसाइट र फोन कलमार्फत आएको अनुरोधअनुसार मोटरसाइकल सर्भिसिङ, बिग्रिएको स्थानमा मर्मतको सेवा दिन्छ । अहिले यो काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा मात्रै उनीहरूको सेवा उपलब्ध छ । प्रयोगकर्ताले आईओएस र एन्ड्रोएड डिभाइसमा उपलब्ध ‘थर्ड ह्वील’ एप, कम्पनीको वेबसाइट वा फोनमार्फत यो सेवा लिन सक्छन् । अहिले दैनिक थोरै मात्र अनुरोध आउने राउत बताउँछन् ।
थर्ड ह्वीलको अहिले आफ्नै सर्भिसिङ सेन्टर भने छैन । बरु उनीहरूले उपत्यकाका चार वटा सर्भिसिङ सेन्टरसँग सम्झौता गरेका छन् र आफूकहाँ आउने मोटरसाइकललाई त्यहाँ लगेर सर्भिसिङ गराउँछन् । प्रयोगकर्ताले बाटोमा बिग्रिएको मोटरसाइकल बनाउन बोलाउँदा सय रुपैयाँ शुल्क लााग्ने र सर्भिसिङका लागि बोलाउँदा पनि उत्तिकै शुल्क लाग्ने राउत बताउँछन् । राउत र बन्दना चौधरी मिलेर स्थापना गरेको कम्पनीमा अहिले १० जना कार्यरत छन् । यीमध्ये ३ जना बाइक बिग्रिएको ठाउँमा मर्मतका लागि पुग्न तयारी अवस्थामा हुन्छन् । यो सेवा बिहान ७ देखि बेलुका ७ बजेसम्म उपलब्ध हुन्छ ।
‘नयाँ काम गर्ने मन थियो । त्यसैले धेरै मानिसले भोगेको समस्या खोज्न थाल्यौं,’ कम्पनी स्थापनाको अनुभवबारे राउतले सुनाए, ‘बाइक बिग्रिने र सर्भिसिङ गर्न जाँदा हुने समय खर्चले धेरैलाई पिरोलेको थाहा पायौं ।’ ‘घर नजिकै सर्भिसिङ सेन्टर नहुँदा, सर्भिसिङ गराउन जाँदा पालो कुर्नुपर्दा र जहाँ पायो त्यहीँ सर्भिसिङ गराउँदा धेरैले दु:ख पाएको अनुभव गर्‍यौं,’ उनी भन्छन्, ‘यो समस्या समाधान गर्ने प्रडक्ट बनाउँदा चल्छ भनेर सुरु गरेका हौं ।’
धेरै मानिसको समस्या समाधान हुने खालका प्रडक्ट बनाउँदा कम्पनी चल्ने मात्रै नभई धेरै मानिसको दैनिकी सहज हुने उनको तर्क छ । यसैलाई आधार मानेर नयाँ आइडियासहित कम्पनी खोलेको राउत बताउँछन् । भन्छन्, ‘चुनौतीपूर्ण काम गर्दा मज्जा आउँछ, अरू काम एकोहोरो हुन्छ ।’
कम्पनी सुरु गर्नुअघि अनलाइनमार्फत बाइक बुकिङ सर्भिसको संयन्त्रबारे अनुसन्धान गरेको उनी बताउँछन् । ‘मार्केट रिसर्च, कम्पनीको प्राविधिक पक्ष मिलाउन धेरै समय लाग्यो,’ उनी भन्छन्, ‘अब भने कम्पनीको काम बढाउन बाँकी छ ।’
प्रयोगकर्ताले बुकिङका लागि प्रयोग गर्ने एप अझ बढी प्रयोगकर्ता मत्री बनाउँदै लैजाने उनी बताउँछन् । एन्ड्रोइड र आईओएस गरी एप एक हजारभन्दा बढी पटक डाउनलोड भएको छ । एपमार्फत प्रयोगकर्ताले आफ्नो मोटरसाइकलको कम्पनी, क्षमताजस्ता विवरण खुलाएर सेवाको बुकिङ गर्न सक्छन् । वेबसाइटमा पनि यही प्रक्रिया छ ।
प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दै गएपछि आफ्नै सर्भिसिङ खोल्ने योजना रहेको उनले सुनाए । ‘अहिले उपत्यकाका चार वटा सर्भिसिङ सेन्टरमा लगेर मोटरसाइकल बनाउँछौं,’ उनी भन्छन्, ‘विस्तारै आफ्नै सर्भिसिङ खोल्ने योजना छ ।’ उनी कम्पनीको अहिलेको अवस्थालाई परीक्षण काल मान्छन् । ‘भर्खरै प्रचारको चरणमा छौं,’ उनी भन्छन्, ‘फुल फ्लेजमा जान समय लाग्छ ।’
धेरैलाई जानकारी दिन अहिले सोसल मिडियामार्फत प्रचार तीव्र पारिएको उनले बताए । ‘प्रयोगकर्तालाई सुरुमा बानी पार्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि विश्वास जगाउनुपर्छ ।’
कम्पनी स्थापनाका लागि ३० लाख लगानी लागेको उनी बताउँछन् । ‘सोचअनुसार ग्राहक बढ्दै गए भने अबको ६ महिनाभित्र नाफामा जान्छौं,’ उनी भन्छन् ।
थर्ड ह्वील एउटा उदाहरण मात्र हो । पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकामा मानिसको दैनिकीलाई सहज बनाउने खालका व्यवसायको सूची लम्बिँदो छ । मोटरसाइकलमार्फत गन्तव्यमा चाँडै पुर्‍याउन सघाउने टुटल, फोनको भरमा ट्याक्सी बोलाउन पाइने सारथि यसका उदाहरण हुन् । साथै, घरघरमा सामान डेलिभरी गरिदिने इकर्स व्यवसायले पनि समय खर्चिने समस्याबाट मुक्ति दिन थालेका छन् ।
bimalnews@gmail.com प्रकाशित : असार २९, २०७५ ११:०६
ब्लकबस्टर मराठी फिल्म सैराटको हिन्दी रिमेक धड्कमा ‘स्टार किड’ इशान खत्तर र जान्भी कपुरले अभिनय गरेका छन् । धड्कबाट यो जोडी धुमधडाका गर्ला त ?
काठमाडौँ — स्टार किड’ लाई डेब्यु गराउन खप्पिस छन्, करण जोहर । नातावादलाई प्रश्रय दिएको भन्दै उनको आलोचना पनि हुन्छ । तर उनका ब्यानरबाट अभिनय सुरु गरेको जोकोहीले लोभलाग्दो ख्याति कमाएका छन् । वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा र आलिया भट्ट पछिल्लो उदाहरण हुन् ।
स्टुडेन्ट अफ द इयरबाट करिअर सुरु गरेका यी तीन कलाकार यतिबेला ‘पिक’ मा छन् । उनीहरूको क्रेज मात्र होइन, अभिनय कौशलको पनि उस्तै प्रशंसा गरिन्छ । अनि त, दुनियाँले जे भनोस्, करण किन पछि हट्थे र ? त्यसकै प्रमाण हुन्, इशान खत्तर र जान्भी कपुर । करणले आफ्नो होम प्रोडक्सनको धड्कबाट यो जोडीलाई चम्काउने प्रयास गर्दैछन् ।
कलाकारद्वय राजेश खत्तर र नीलिमा अजिमका पुत्र हुन्, इशान । शाहिद कपुरचाहिँ उनका दाइ (आमा एउटै, बुबा फरक) हुन् । त्यसैले भन्नै परेन, उनी फिल्मी वातावरणमै हुर्किए । त्यस्तो त, धड्क उनको पहिलो फिल्म होइन । अघिल्लो वर्ष उनी अभिनीत वियोन्ड द क्लाउड्स रिलिज भएको थियो, जसलाई निर्देशन गरेका थिए, ‘भेट्रान’ माजिद माजिदी । फेस्टिभलहरूमा पर्याप्त चर्चा बटुले पनि यो फिल्म मूलधारको थिएन, त्यसैले मास अडियन्सले इशानलाई चिन्न पाएका छैनन् । धड्कबाट त्यही अभाव पूर्ति गर्ने प्रयास गरेका छन्, इशानले ।
उता, जान्भी त दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी र निर्माता बोन्नी कपुरकी छोरी भइहालिन् । अर्जुन कपुरचाहिँ उनका सौतेनी दाइ । श्रीदेवी जीवित छँदै धड्कको सुटिङ करिब सकिएको थियो । श्रीदेवीको चाहमै खेलेकी थिइन् । तर आमाले फिल्म हेर्न पाइनन् । सोही कारण जान्भीले धड्कमा आफ्नो ‘भावना जोडिएको’ बताउँदै आएकी छन् । फिल्मलाई ‘हाइप’ दिलाउन माहिर करण जोहरले अनेक प्रयास गरिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा यो जोडीलाई खुब रुचाइएको छ । कतिसम्म भने उनीहरू ‘रियल लाइफ’ मा पनि प्रेममा छन् भन्ने खबर सार्वजनिक भएका छन् । प्रेमको प्रश्न सोध्दा दुवै मुस्कुराउँछन् मात्र । फेरि बलिउडमा फिल्म रिलिजको पूर्वसन्ध्यामा हिरो–हिरोइनको अफेयरको चर्चा हुनु नौलो होइन । आलियाकै नाम कहिले सिद्धार्थसँग जोडियो, कहिले वरुणसँग । त्यसैले फिल्म पब्लिसिटीको फन्डा मात्र पनि नहोला भन्न सकिन्न, इशान–जान्भीको अफेयर ।
तर धड्क प्रतीक्षित बन्नुको कारण यति मात्र अवश्य होइन । यसको आफ्नो विशेष गुण छ । यो सन् २०१६ मा प्रदर्शित मराठी फिल्म सैराटको हिन्दी रिमेक हो । चार करोड भारुमा बनेको सैराटले १ सय १० करोड कमायो, त्यो पनि मराठी भाषामा मात्र । निर्माताले अन्य भाषामा डबिङ गर्न इन्कार गरेका थिए । भारतीय लोकतन्त्रको अनेक दागमध्ये एक हो, ‘अनर किलिङ’ । अन्तरजातीय र अन्तरधार्मिक विवाहपछि परिवारले कथित इज्जत जोगाउन आफ्नै सन्तानको हत्या गर्ने घटना भारतमा दिनानुदिन बढ्दै छ । सन् २०१५ मा सोलापुरमा यस्तै ‘अनर किलिङ’ भएको थियो । यही घटनामाथि निर्देशक नग्राज मज्जुलेले सैराट बनाएका थिए । फिल्मले नसोचेको सफलता पायो । दर्शकको यति भीड लाग्यो कि हलमा चौबिसै घण्टा फिल्म लगाउनु पर्‍यो । मध्यरातका शो पनि हाउसफुल हुन्थे । इन्टरनेट मुभी डाटाबेस (आईएमडीभी) ले नै १० मा ८.५ रेटिङ दिएको छ । मुख्य भूमिका थिए, रिंकु राजगुरु र आकाश थोकर । फिल्म रिलिजको भोलिपल्ट कडा सुरक्षाकिना हिँड्नै नसक्ने भए, जता गए पनि दर्शकले पछ्याउने । रिंकुले त नेसनल अवार्ड नै जितिन् । भारतीय मिडियाले लेखेका थिए, ‘सैराटले खास अर्थको जादू देखायो । रिंकु र आकाशलाई ‘ओभरनाइट’ स्टार बनायो ।’
धड्कले ‘लिगेसी’ लाई निरन्तरता देला ? रिंकु र आकाशझैं इशान र जान्भी सर्वप्रिय बन्लान् ? यही प्रश्न इशानलाई सोधिएको थियो, धड्कको ट्ेरलर लन्च इभेन्टमा । उनले मुस्कुराउँदै जवाफ दिएका थिए, ‘सफलता/असफलता भोलिको कुरा । हामीले हाम्रातर्फबाट सक्दो प्रयास गरेका छौं । मेरा लागि भन्नुहुन्छ भने सैराटजस्तो महान् फिल्मको रिमेकमा खेल्न पाउनु सपनाजस्तै हो ।’
शशांक खैतान निर्देशित धड्क जुलाई २० मा रिलिज हुँदै छ ।